कोरोना भाइरसबाट बच्न के उपाय अपनाउनु भएको छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः फाल्गुन ३०, २०७६ - साप्ताहिक
सोनम पाख्रिन, निर्देशक
घर बाहिर गरिने सबै कामका लागि सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग गरिन्छ । घर बाहिर कम निस्कन थालेको छु ।
सञ्जय खतिवडा, अभिनेता
भीडभाडमा जान्न, जानै पर्‍यो भने मास्क प्रयोग गर्छु । चिसो खानेकुरा खान बन्द गरेको छु । रुघा–खोकी लाग्यो भने मेडिकलमा गएर डाक्टरसँग सल्लाह लिने योजना छ । हरेक खानेकुरा धेरैभन्दा धेरै पकाएर खाइरहेको छु ।
शिव बिक, कोरियोग्राफर
भीडभाडमा गएकी छैनँ ।
कुन्ति मोक्तान, गायिका
सकेसम्म भीडभाडबाट टाढा नै रहन्छु । बाहिर निस्कँदा माक्स छुटाउने गरेको छैन । सरसफाइमा पनि पहिलेभन्दा बढी नै समय दिएको छु ।
भीडभाडमा जान बन्द गरेँ । मे महिनासम्मका आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम स्थगित गरेको छु । तातो पानी निरन्तर पिउँछु । बेला–बेलामा साबुनपानीले हात धोइरहेको छु ।
टंक चौलागाईं, रंगकर्मी
सकभर कमभन्दा कम मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्न थालेको छु । हरेक घण्टामा साबुन–पानीले हात धुने गरेको छु । त्यस्तै सेनिटाजरको प्रयोग गर्न थालेको छु ।
सानु खान, इभेन्ट म्यानेजर
हात मिलाउन र अंकमाल गर्नबाट त पहिलेदेखि नै टाढै बसियो । सरसफाइमा पनि सधैं नै ध्यान दिइन्छ । भीड खासै मन पर्दैन । नेपालीलाई अरूलाई छोइहाल्ने रोगले हत्तपत्त छुँदैन । बाँकी हेरौं ।
शान बस्न्यात, चलचित्र लेखक
सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएको छु । सकेसम्म हुलमुल हुने र नयाँ ठाउँमा जना छोडेको छु । अरू त भगवान भरोसा !
फूपु तेन्जिङ शेर्पा, युवा उद्यमी
एकदम हाइजेनिक बस्न जरुरी छ । भीडभाडलाई एभोइड गर्दै बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन थालेकी छु ।
सकेसम्म भीडभाडमा जान्नँ । अहिले डाइट प्लानमा भएकाले पनि घरमै बसेकी छु । हुन त संसारमा बेला–बेलामा एउटा न एउटा महामारी चलिनै रहेको हुन्छ । अहिले सूचना एवं प्रविधिको उच्च विकासले कहिलेकाहीँ आवश्यकताभन्दा बढी हल्ला भएर मानसिक रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ ।
उषा शेचरन, साहित्यकार
हात धुने र मास्क लाउने बाहेक केही गरिएको छैन । भगवान भरोसा भन्नू पर्‍यो ।
एउटा एन ९५ मास्क किनेर लगाएको छु । बिहानै उठेर हल्का योगा गर्छु । किनभने शरीरमा जति सकारात्मक ऊर्जा निकाल्यो, रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति उति विकास हुन्छ । सकेसम्म अत्यन्तै ठूलो भीडमा गएको छैन । विदेशका कार्यक्रममा जाने निर्णय गरेको छैन ।
फेसबुक र म्यासेन्जरमा आफ्नै तालले पोस्ट गरिएका बकम्फुसे उपायका पछाडि नलागेर विशेषज्ञ चिकित्सकले भनेका कुरा मान्ने काम गरिरहेको छु ।
सन्तोष खनाल, भिडियो जक्की
प्रत्येक १५ मिनेटमा मनतातो पानी पिउँछु । हात ह्यान्ड वास प्रयोग गरी १५–२० मिनेटको फरकमा धोइरहेको छु । मास्क त अनिवार्य नै हो कोरोना न आउँदैदेखि । ट्रेनको यात्रा कम गरेको छु । वृद्घ–वृद्धाहरूसँग अलि सजक छु । अहिलेसम्म म बस्ने जापानको सिटीमा एक जनालाई मात्र कोरोना देखिएको छ । फैलिने क्रम ज्यादै न्यून छ । जापानमा शिर निउराउने चलन भएकाले हात मिलाउनु पर्दैन । त्यो चाहिँ खुब गज्जब लागिरहेको छ । नेपालमा नमस्कार प्रयोगमा ल्याए गज्जब नै हुने देखियो ।
सचिन आचार्य, सञ्चारकर्मी
भीडभाडमा कम जाने गरेकी छु । आफू र आफ्नो वरिपरि सरसफाइमा ध्यान दिएकी छु । सकेसम्म माछा–मासु खाएको छैन । साथीभाइसँग भेटघाट गर्दा नमस्कार नै सही उपाय भएकाले हात मिलाउने, हग गर्ने गरेको छैनँ । बाहिर जाँदा मास्क प्रयोग गरिरहेकी छु । अहिले प्राय: कार्यक्रम पनि रद्द गरेर नै बसेकी छु । स्वास्थलाई फिट कसरी राख्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिइरहेकी छु ।
जहाँ जाँदा पनि मास्क प्रयोग गरिरहेको छु । हात मिलाउन बन्द गरेको छु ।
सुनिल सिंह ठकुरी, गायक
विश्व स्वास्थ संगठनको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई अपनाइरहेको छु ।
प्रभात रिमाल, सञ्चारकर्मी